တောင်အာဖရိက ရွှေတွင်းမှာ အလုပ်သမား ၉၀၀ ကျော် ပိတ်မိနေ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး တောင်အာဖရိက ရွှေတွင်းမှာ အလုပ်သမား ၉၀၀ ကျော် ပိတ်မိနေ
MUM09 BOMBAY (INDIA) 05/04/2013.- Miembros de los servicios de emergencia retiran el cadáver de una de las víctimas tras derrumbarse "un inmueble de construcción ilegal" en la localidad de Thane, próximaaBombay, en el oeste de la India, hoy, viernes5de abril de 2013. Al menos 34 personas y "otras muchas siguen atrapadas" según informó hoyaEFE una fuente policial. EFE/Divyakant Solanki
တောင်အာဖရိက ရွှေတွင်းမှာ အလုပ်သမား ၉၀၀ ကျော် ပိတ်မိနေ
တောင်အာရိက ရွှေတွင်းတစ်ခုထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမား ၉၅၀ ဟာ မြေအောက်မှာ ပိတ်မိနေပါတယ်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ဝယ်လ်ကွန်မြို့အနီးရှိ ဆစ်ဘာနိုင် စတီးလ်ဝါတာရေတွင်း အနီးရှိ လျှပ်စစ်ကြိုးတွေကို မိုးကြိုးပစ်ချမှုကြောင့် မီးကြိုးတွေ ပြတ်ကျခဲ့ပြီးနောက် ရွှေတူးသမားတွေဟာ လိုဏ်ခေါင်းအတွင်း ပိတ်မိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိတ်မိနေသူတွေထဲက ၄၀ ဦးကို ကယ်တင်လိုက်နိုင်ပေမယ့် တခြား လူ ၉၀၀ ကျော် မြေအောက်မှာ ပိတ်မိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်မိနေသူတွေကို ရေနဲ့ အစားအစာတွေတော့ ပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။ တောင်အာဖရိကမှာ သတ္တုတွင်းတွေဟာ အနက် ၂ မိုင်အထိ ရှိပါတယ်။
တောငျအာရိဖက ရှတှေငျးမှာ အလုပျသမား ၉၀ဝ ကြျော ပိတျမိနေ
တောငျအာရိက ရှတှေငျးတဈခုထဲမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့ အလုပျသမား ၉၅၀ ဟာ မွအေောကျမှာ ပိတျမိနပေါတယျ။
တောငျအာဖရိကနိုငျငံ၊ ဝယျလျကှနျမွို့အနီးရှိ ဆဈဘာနိုငျ စတီးလျဝါတာရတှေငျး အနီးရှိ လြှပျစဈကွိုးတှကေို မိုးကွိုးပဈခမြှုကွောငျ့ မီးကွိုးတှေ ပွတျကခြဲ့ပွီးနောကျ ရှတေူးသမားတှဟော လိုဏျခေါငျးအတှငျး ပိတျမိနတော ဖွဈပါတယျ။
ပိတျမိနသေူတှထေဲက ၄၀ ဦးကို ကယျတငျလိုကျနိုငျပမေယျ့ တခွား လူ ၉၀ဝ ကြျော မွအေောကျမှာ ပိတျမိနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ ပိတျမိနသေူတှကေို ရနေဲ့ အစားအစာတှတေော့ ပေးပို့ထားနိုငျပါတယျ။ တောငျအာဖရိကမှာ သတ်တုတှငျးတှဟော အနကျ ၂ မိုငျအထိ ရှိပါတယျ။
Previous article တရုတ်မှာ ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားနဲ့ နွား ၇ ကောင် အောင်မြင်စွာမွေး
Next articleရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦး လွတ်ရေး တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ဖို့ ဂူတာရက်ဇ် ပြော